भारतमा दन्कियो देशभक्तिको आगो : सन्दिप लामिछानेसहितका दर्जनौं खेलाडीलाई खेल्न प्रतिबन्ध ! « The News Nepal
भारतमा दन्कियो देशभक्तिको आगो : सन्दिप लामिछानेसहितका दर्जनौं खेलाडीलाई खेल्न प्रतिबन्ध !
काठमाडौ । अहिले भारतीय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामा खेल क्षेत्रलाई लिएर ठुलो विरोध जनाएका छन् । हुन त राजनीति र खेल फरक कुराहरु हुन तर पुलवा आक्रमण पश्चात भारतले पाकिस्तानी कलाकार, खेलाडी सबैंलाई प्रतिवन्ध लगाउँने जनाएको छ । अहिले भारतीय क्रिकेट फ्यानहरुले एउटा माग लिएर अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरुले पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने खेलाडीहरुलाई इण्डियन प्रिमियर लिगमा खेल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन् ।
उनीहरुले भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआइलाई यो माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यदि बीसीसीआइले उनीहरुले भनेजस्तो गरेमा नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछानेसहित दर्जनौं विदेशी खेलाडी प्रतिबन्धमा पर्ने देखिएको छ । केहीले भने खेलमा राजनीति राम्रो नहुने भन्दैं भारतको गलत्त बुझाई भएको जनाएका छन् । तर कलाकार पछि भारतले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध भएका खेलाडीहरु माथि पनि रोक लगाउँन सक्ने देखिएको छ ।
पाकिस्तान सुपर लिगको प्रसारणकर्ता डी स्पोर्टसले भारतमा पाकिस्तान सुपर लिगको प्रसारण समेत बन्द गरेको जनाएको छ । अहिले पाकिस्तान सुपर लिगमा एबी डिभिलियर्स, आन्द्रे रसेल, किरन पोलार्ड लगायतका आइपिएलका सुपरस्टार खेलाडहिरु खेलिरहेका पनि छन् । नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछाने समेत बिग बाश लिग सकेर पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न जाँदैछन् ।
सन्दिप लाहोर कलन्दर्समा आबद्ध छन् जहाँ उनीसँगै स्टार खेलाडी एबी डिभिलियर्स रहेका छन् । यदी भारतले यस्तो कदम चाल्यो भने नेपाल लगायत विश्वभर रहेका खेलप्रेमीहरुका लागी ठुलो चोट पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् ।